नेपालको जलविद्युतमा बंगलादेशले एक खर्ब लगानी गर्दै छ - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
पुष १२, २०७४ 1408
सन् २०१४ सम्म नेपालको पक्षमा रहेको नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापार त्यसपछि भने बंगलादेशको पक्षमा गएको छ । गत आव ०७३-७४ मा नेपाल र बंगलादेशबीच कुल ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको व्यापार भएकोमा ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नेपाललाई घाटा भएको थियो । एकातिर नेपाल–बंगलादेशबीच व्यापारको आकार बढ्दै छ, अर्कातिर नेपालको व्यापारघाटासमेत बढ्दै गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि दुवै देशका व्यवसायीले सहज रूपमा व्यापार गर्न विभिन्न बाधाहरू पनि छन् । नेपाल र बंगलादेशबीच यातायात तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा पनि सहकार्यको खाँचो खड्किएको छ । यिनै विषयमा नेपालका लागि बंगलादेशकी राजदूत माश्फी बिन्ते शाम्ससँग पर्शुराम काफ्ले र जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :
स्रोत: नयाँ पत्रिका दैनिक